प्रतिनिधिसभा भंग भए लगत्तै राजधानीमा देखियो यस्तो अवस्था! – PathivaraOnline
Home > समाचार > प्रतिनिधिसभा भंग भए लगत्तै राजधानीमा देखियो यस्तो अवस्था!
काठमाडौं – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेकाे सिफारिसबमाेजिम राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा भंग गरेकी छन्।आइतबार बिहान मन्त्रिपरिषद्काे आकस्मिक बैठक राखेर प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रपति भण्डारीसमक्ष संसद् विघटनका लागि सिफारिस गरेका थिए। त्यसपछि आजै दिउँसाे प्रतिनिधिसभा भंग भएकाे घाेषणा गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले प्रतिनिधिसभा निर्वाचन २०७८ वैशाख १७ र २७ गतेलाई ताेकेकी हुन्।
आम नागरिकमा फेरि नेपालमा संकटकाल लाग्ने हो की भन्ने डर छ । अझ देशमा सेना परिचालन हुुने र देश थप अस्थिरता तर्फ धकेलिने भयले सबै अबको निकाश के होला भनेर हेरिरहेका छन् । तर विज्ञहरुको धारणा भने फरक छ । नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रपतिलाई प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक कदमलाई सदर नगर्न अपिल गरेको छ । चौतफी विरोध भइरहँदा देशभर सुरक्षा ‘अलर्ट’ गरिएको छ । देशका विभिन्न स्थानमा हुनसक्ने प्रदर्शनलाई मध्यनजर गर्दै सुरक्षा निकायलाई तयारी अवस्थामा राखिएको हो ।
एक उच्च सुरक्षा अधिकारीका अनुसार अनौपचारिक रुपमा मुलुकका सबै सुरक्षा निकायले आआफ्नै हिसाबले सतर्कता बढाएका हुन् । प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो कदमले मुलुकका थप संकट निम्तनसक्ने सुरक्षा निकायको विश्लेषण छ । राष्ट्रपतिबाट प्रतिनिधिसभा भंग गरेसँगै उत्पन्न हुने सक्ने सम्भावित परिस्थतीलाई ध्यान राखेर सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीले राजधानीमा सुरक्षा तैनाथी बढाएका छन् ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार, बालुवाटारको भाटभाटेनी क्षेत्र, राष्ट्रपति निवास आसापास, विभिन्न राजनीतिक दलका कार्यालय आसपास र माइतीघर क्षेत्र लगायतका स्थानमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको उपस्थितीको बढाइएको छ । यस्तै, सेनाले मुख्यालय जंगी अड्डामा प्रमुख सैनिक अधिकृतहरु (पीएसओज) को बैठक पनि बसेको छ । प्रधानमन्त्रीको कदमपछि मुलुकमा पर्न सक्ने सुरक्षा चुनौती र प्रभावहरुको विषयमा मुख्यालयमा छलफल भएको छ ।
यसबीच नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले उच्च सतर्कता अपनाउन मातहतका इकाईहरूलाई निर्देशन दिएका छन् ।
यसै क्रममा प्रतिनिधिसभा विघटन भएको निर्णयविरुद्ध काठमाडौंलगायत मुलुकका विभिन्न सहरमा प्रदर्शन सुरु भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदम असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र निरंकुश भएको भन्दै आइतबार दिउँसो ३ बजेदेखि काठमाडौंको माइतीघर क्षेत्रमा नेकपासम्बद्ध विभिन्न जनवर्गीय संगठनका कार्यकर्ता प्रदर्शनमा उत्रिएका हुन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीको कदम गैरसंवैधानिक र राजनीतिक बेइमानी भन्दै रामकुमारी झाँक्रीले गरिन यस्तो माग!